Sida loo doorto midabka jikada ee saxda ah? - Alaabta guriga - waxyi
Alaabta guriga - dhiirigelin
Soofyada casriga ah
Darbiyada qolka fadhiga
Soofyada isku laaban
Jikada casriga ah
Sariiro laba jibbaaran
Laabta casriga ah ee khaanadaha
Qolalka jiifka casriga ah
Sariiraha carruurta oo leh sariir dheeri ah
Kuraasta qolka carruurta
Sidee loo doortaa midabka jikada saxda ah?
28 Maarso, 2020 Febraayo 16, 2021 admin Jikada casriga ah
Waxaa jira noocyo badan oo ah cutubyada jikada, oo ku xiran maaddada, tayada iyo miisaaniyadda maaliyadeed, laakiin ugu yaraan sida ugu muhimsan waa doorashada midabka. Midabkee ugu fiican jikadaada? Waxaan kaa caawin doonaa doorashadaada!
Qaabka marmar ee cad iyo beige
Kuwani waa hadiyadaha inta badan la isticmaalo, gaar ahaan miisaska jikada ee laga sameeyay agabyada dabiiciga ah sida granite ama quartz, laakiin xitaa kuwa doorta hooska looxyada laminate -ka ah sida midabadaas maxaa yeelay waa dhexdhexaad waxayna ku habboon yihiin miisaska jikada iyo qaababka kala duwan. Way dhalaalaan, laakiin uma adka sida loo ilaaliyo sida barafka cad.
Midabka barafka cad waa midab qurux badan, ha ahaato miiska jikada ama miiska. Hal shay waa hubaal: jikada barafka cad-cad waxay u egtahay mid cajiib ah isla markaasna aad u jilicsan. Looxa cad wuxuu ku habboon yahay qoysaska tirada yar, laakiin sidoo kale gudaha gudaha casriga ah.
Jikada yar -yar, marka lagu daro kabadhka cad, waxay kordhisaa booska, halka jikadaha waaweyn, waxay abuurtaa isbarbardhig aad u weyn oo leh gole alwaax oo aad u cad.
Miisaska jikada ee alwaaxda ah marar dhif ah ayaa la adeegsadaa, laakiin waxaa aad u caan ah miisaska iyo looxyada ka samaysan alwaaxda dahaarka leh. Waxay ku habboon yihiin armaajooyinka caddaanka ah iyo jikada qaabka Scandinavian-ka, maadaama ay ku dhammaystiraan caddaanka xad-dhaafka ah ee madhan oo leh xoogaa hoos ah diirran.
Madow ama madow
Armaajooyinka jikada madow ama gabi ahaanba mugdiga ah waxay si fiican ula shaqeeyaan armaajooyinka jikada cad iyo mugdiga iyo daboollada. Jikada madoow oo gabi ahaanba mugdi ah, waxaa loo isticmaalaa oo kaliya haddii aan rabno inay ku habboon tahay deegaanka, laakiin waa haddii jikada ay tahay mid ballaaran oo si fiican u iftiimisay iftiin dabiici ah ama macmal ah. Oo leh kabadhka jikada cad, waxay abuurtaa isbarbardhig aad u weyn waxaana sidoo kale loo isticmaali karaa jikada yar -yar.
Miisaska jikada cawlan ee cirro leh ayaa aad iyo aad u caan baxay sanadihii la soo dhaafay waxayna ku dhowaad cabbiraan caannimada khadadka beige -ka caadiga ah ama kareemka. Sababtu waa mid sahlan, cawlku waa dhexdhexaad sida beige wuxuuna leeyahay midabbo la mid ah, laakiin wuxuu aad ugu habboon yahay naqshadda ugu yar ee caanka ah.
Waxaan u doorannaa roogga qolka carruurta
Fadhiga maqaarka, haa mise maya?
Qoraalada ugu caansan
Miisaska jikada iyo kuraasta Meey 29, 2020
TOP 5: Sariiraha ugu fiican ee ugu fiican 2018 ilaa € 500 Nofeembar 20, 2017
TOP 5: Darbiyada noolaha ugufiican sanadka 2018 ilaa € 400 Nofeembar 20, 2017
TOP 5: Qalabka ugu casrisan ee jardiinada 2018 Nofeembar 20, 2017
Dulucda Mawduuca by Colorlib Waxaa suuro galiyay WordPress